Westlake Pro သည် JMR Mac Pro RAID Rackmount Workstations နှင့်အတူကမ္ဘာ့အဆင့်မီအသံအဆင့်များကိုတည်ဆောက်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » Westlake Pro ကို JMR, Mac Pro ကို RAID Rackmount Workstation နှင့်အတူကမ္ဘာ့ဖလား-Class ကိုအသံဇာတ်စင်ဆောက်
Los Angeles မြို့ based Westlake Pro ကို, လိုလားသူအသံဖိုင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စတူဒီယိုဒီဇိုင်နာအနိုင်ရထားတဲ့အထင်ကရဆုရှေးခယျြနှင့်ပေါင်းစည်းထားသည် JMR အီလက်ထရောနစ် လှပျြစစျTM ThunderboltTM certified ရရှိထားပြီး rackmount စက် စတူဒီယိုရဲ့မြန်နှုန်းမြင့် SAN ကလပ်စသို့.
အဆိုပါ JMR Lightning Thunderbolt (LTNG-XQ-8-RMMP) ထုတ်ကုန် Apple ရဲ့ Mac Pro ပေါင်းစပ်®သုံး လွန်စွာလိုလားသော Pro ကို Tools များ® | HDX ကတ်များ, RAID သိုလှောင်မှုတစ်ထုံးစံ I / O panel ကနှင့်သောစတူဒီယိုရဲ့မြန်နှုန်းမြင့် SAN ကလပ်စသို့ကွန်ရက်စက်တစ်ဖိုင်ဘာလိုင်းကို HBA ။
ရုပ်ရှင်နဲ့ TV များအတွက်စက် Re-အသံဖမ်း, ရောစပ်, အမှတ်ပေး, အလိုအလျောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုအစားထိုး (ADR) အတွက် Westlake Pro ကိုဖွင့်သံကိုစင်မြင့်ဖြေရှင်းချက်အတွက်အသုံးပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း rackmount နှင့် Foley ။
Westlake Pro ကို Mac အတွက် Pros အပေါ် running 200 Pro ကို Tools များစနစ်များကိုကျော်ထောကျပံ့ပေးနိုငျကွောငျး post ကိုထုတ်လုပ်မှုစက်ရုံများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အသစ်, Mac Pros '' Cylinder ပုံစံဒီဇိုင်းနှင့် Thunderbolt သာအများအပြားစတူဒီယိုမှာလုပ်ငန်းလည်ပတ်စိန်ခေါ်မှုဖန်တီး interface ။
ဟာမစ် "Gadget ကို" Hopkins, Westlake Pro ကိုအလုပ်အမှုဆောင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလိုအပ်ကြောင်းပေါ်ပေါက်သည့်အခါသူတို့အလွယ်တကူ reconfigured နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ client များ '' စက် Semi-အမြဲတမ်း installs အဖြစ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ် "ဟုပြောသည်။ အသစ်က Mac Pro ထွက်လာသောအခါကစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုထောက်ပံ့ပေးနေချိန်မှာကျနော်တို့ကထိန်းသိမ်းရန်နှင့်ပြန်လည်စီစဉ်ထားရှိရန်ဖို့စိန်ခေါ် system ကိုအောင̶်၎င်း၏ဒီဇိုင်းလိုအပ်တိုးချဲ့သေတ္တာများ, ထူးခြားတဲ့ထိန်သိမ်းနှင့်များစွာသောထိတွေ့ကြိုးတွေလိုအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါက JMR နှင့်ရုံအဟောင်းတွေကို Mac Pro ကိုတာဝါတိုင်များကဲ့သို့တဦးတည်းစနစ်အစအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်များကို encapsulate ၎င်းတို့၏စွမ်းရည်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်ခဲ့သည်။ "
အဆိုပါ JMR Lightning Thunderbolt (LTNG-XQ) ထုတ်ကုန်မိသားစု PCIe အရံပစ္စည်းချိတ်ဆက်ရန်လိုအပ်နေ Apple က Mac အတွက် Pro ကိုအသုံးပြုသူများအတွက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ တံတားတစ်ခုမှာ Thunderbolt-2 တံတားနှစ်ခု slot နှစ်ခုမောင်းနှင့်ဒုတိယပြည်တွင်းရေး Thunderbolt-20: အဆိုပါ LTNG-XQ ထုတ်ကုန်နှစ်ခုလွတ်လပ်သော Thunderbolt-2 2Gb / s ကိုတံတားဆားကစ်ကို အသုံးပြု. လေး Full-bandwidth ကို PCIe slot နှစ်ခု featuring စျေးကွက်အပေါ်သာသိုလှောင်မှုစနစ်များများမှာ အခြားနှစ်ဦးကို slot နှစ်ခုမောင်း။ Mac က Pro ကိုကဲ့သို့သောအိမ်ရှင်ဖို့ Connections ကို Mac ကဖို့သုံးရရှိနိုင် Thunderbolt2ဘတ်စ်ကားဆက်သွယ်မှုနှစ်ခုသုံးပြီးပါဝင်သည်။
JMR Lightning Rackmount Workstation နှင့်အတူ Westlake Pro ကိုပစ္စည်းသိုလှောင်ဆင်
JMR Lightning Desktop နဲ့ Rackmount configurations
Hopkins ဆက်လက် "Sessions နှင့်ရုပ်ရှင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဖြစ်လာမှဆက်လက်အသံ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှကိုင်တွယ်ရန်ပိုပြီးအပုဒ်လိုအပ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာရှုပ်ထွေးကျနော်တို့ဖိုင်ဘာ access ကိုများအတွက်အပို slot ကနှင့်အတူ3HDX ရဲ့နှင့်ဒေသခံ RAID မောင်းထုတ်ဖို့ရှိသည်အမြန်နှုန်း, ဆက်သွယ်မှုများနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရလိုအပ်ချက်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်မယ့်စနစ်ကလိုအပ်သည်။ JMR ရဲ့ system ကိုထူးခြားတဲ့4ကမ်းလှမ်းth ငါတို့အပေါင်းတွင်တဦးတည်းအတွက် high-performance ကို, Self-ပါရှိသော, ဘက်ပေါင်းစုံစနစ်အကြောင်းလုပ်ဖို့ခွင့်ပြု PCIe slot က။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ထိန်သိမ်းမှုစနစ်ဒီဇိုင်းပင် Mac Pro မှာကတ်များဖလှယ်ယခုပိုမိုလွယ်ကူသည်။ "
"JMR ငါတို့အလိုအဘယ်အရာကိုနားထောင်, စတူဒီယိုမှထွက်လာရန်မိမိတို့၏အကြွင်းမဲ့အာဏာလိုလိုလားလားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအထင်ကြီးခြင်း, ထုံးစံဒီဇိုင်းကိုမှကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးခဲ့သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်များတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးတဲ့စနစ် configure နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ client များအတွက်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာ," Hopkins ကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ "ဒါဟာကျွန်တော်မတိုင်မီ JMR Lightning ထုတ်ကုန်အကောင်အထည်ဖော်ဖို့တစ်ခုတည်းစနစ်ကလိုအပ်သမျှသောတန်ဆာသိုလှောင်ခြင်းနှင့်သီးနှံများကိုပုံမှ 12 ထိန်သိမ်းနေရာများယူခဲ့ပါတယ်။ ယခုငါတို့သေသပ်စွာအတွင်းမှအရာအားလုံးနဲ့ 4U ထိန်သိမ်းအာကာသအတွင်းကိုက်ညီသောတဦးတည်း JMR ကို Workstation ရှိသည်။ အဆိုပါစနစ်အားကောင်းစွာအစိုင်အခဲကျောက်ထွက်ထင်နှင့်တင်းကျပ်စွာဘက်ပေါင်းစုံဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ခြေလိုင်းကျနော်တို့ကအရမ်းသဘောကျပြီးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၏။ "
အဆိုပါ JMR Thunderbolt ထုတ်ကုန်မိသားစုအပေါ်အသေးစိတ်မှာတွေ့နိုင်ပါသည် www.jmr.com/thunderbolt-storage-products-external-mac-pro-storage/.
Westlake Pro ကိုအပေါ်ထပ်မံသိရှိလိုပါကမှာသူတို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု www.westlakepro.com.
Apple Apple က Mac Pro audio post ကိုထုတ်လုပ်မှု ထုတ်လုပ်မှု ပြန်လည်ရောင်းချသူများ က Ultra HD ဖိုရမ် 2017-06-13
ယခင်: Bexel ထပ်ပြောသည် 300 Litepanels Astra 6X အားကစားလူငယ်ကဏ္ဍ '' လိုအပ်ချက်များပြည့် Range ပံ့ပိုးရန်အလင်းများ LED
နောက်တစ်ခု: 2021 အားဖြင့်ပိုက်လိုင်းလွှမ်းမိုးထားသောဗီဒီယို!